August 8, 2020 5658
नायी’का आँचल श्रेष्ठसंग’को विवाह पछि अहिले उदिप श्रेष्ठ पनि मिडियामा छाइरहेका छन् । आँचलको प्रेम र विवाह जिवनका बा’रेमा गरिने चर्चामा उदिप जोडिन आइपुग्छन् ।
विवाह ल’गत्तै लक’डाउन भएका कारण उदिप र आँचल निकै लामो समय संगै समय बिताउन पाएका छन् । उनीहरुले घरमै निकै रमाइलो समय बिताएका थिए । लकडाउनको अन्त्य’संग आँचल फेरी का’ममा फर्कीएकी छन् । उनले म्युजि’क भिडि’योमा काम सुरु गरेकी छन् ।
व्यवसाय बारे बताउँदै
उदिप पेशाले चिकित्स’क हुन् । उनीह’रुको करिब डेढ वर्ष लामो प्रेम पछि विवाह गरेका हुन् । दुई जनाको विवाहको पनि निकै चर्चा भएको थियो । निकै भब्यता’का साथ भए’को विवाहको सामा’जिक सञ्जाल र मिडियामा चर्चा भएको हो ।
आँचलले लगा’एको गहना र कप’डाको पनि कुरा भएको थियो । उदिप पेशाले चिकित्सक भएका कारणले लकडाउ’नका समयमा पनि उनी भने ब्यस्त नै थिए । आँ’चल भने घरमै रमाइलो समय बिताएकी थिइन् । लकडाउन अन्त्य भएसंगै बाहिर निस्केकी आँच’लले उदिपको कार्यालय घुमाएकी छन् ।
उदिपको अफिसमा युट’युवरलाई लि’एर गएर उनले त्यहाँको वस्तुस्थितीको बारेमा जानकारी गराएकी हुन् । उनको कार्यालय बालुवाटारमा छ । उनको हेल्दी च्वाइस क्लीनिक सञ्चा’लन गरेका छन् । त्यसमा पाइने सबै सेवा र सुविधाका बारेमा उनले जानकारी दिएका छन् ।
भट्टचन कम्प्लेक्स’मा भएको उन’को क्लीनिकमा कपालको ट्रान्सप्लान्टको काम पनि हुन्छ । उनले त्यसवाहेक अन्य कामहरु पनि पर्छन । आँचलले श्रीमान उदिप’कोक काममा पनि स’हयोग गर्छिन । उनी उदिप’संगै अफिस जानिछन् र काममा सघाउने गरेकी छन् ।
Prevविवादपछि शिशिरले भिडियो मार्फत भावुक हुँदै यसरी माफी मागे (भिडियो सहित)
Nextघटेनन् संक्रमित, आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्
एसईई रिजल्ट प्रकाशित ! यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
टिकटक बनाउदा झोलुङ्गे पुलबाट मान्छे खसेको प्रत्यक्ष देख्ने यसो भन्छन् (भिडियो सहित)
लाइसेन्सका लागि अनलाइन फाराम खुल्यो, कहिले देखि कहिले सम्म ? थाहा पाउनुहोस्
नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको कारण एक सुत्केरी महिलाको मृ’त्यु
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134580)